नेपालभित्रको पुस्तक बजारः ओरालो लागेको हरिणको चाल - Everest Talk
नेपालभित्रको पुस्तक बजारः ओरालो लागेको हरिणको चाल1 min read
पुस्तकमाथि लगाइएको कर सरकारको हेपाह प्रवृति हो । इतिहास नै हेर्ने हो भने सरकार बौद्धिकसँग डराइरहेको देखिन्छ ।
२०७६, २९ माघ बुधबार १६:१८
in एभरेष्ट टक विशेष, मुख्य समाचार, शिक्षा
सीमाभन्दा बाहिरका मुलुकलाई सम्झेर एकचोटि सीमाभित्र पसौँ । ट्रेनको सिटमा बसेर किताब पढिरहेका अनुहारहरू देख्दा लाग्छ कि त्यो देश पढेर नै समृद्ध भएको हो । गाडीको भीडमा उभिएर नै किताबमाथि आँखा डुलाइरहेको जमात देख्दा लाग्छ ती मान्छेलाई देशको चिन्ता छ । विश्वमा जति पनि देश विकाश भए ती सबै पठन संस्कृतिको कारणले नै विकसित भएका हुन् ।
समय परिवर्तन हुँदैन । तर समयकै काखमा हुर्किने अनेक पक्ष परिवर्तन हुन्छन् । पुस्तकमा पनि क्रमशः गुणस्तर विकाश हुँदै आयो । यो समयमा एकातर्फ पुस्तकका हार्ड कपीले गुणस्तरको फड्को मार्दैछ भने अर्कातर्फ डिजिटलका पुस्तक सामाग्रीबाट पनि समय अछुतो रहन सकेको छैन । मन लागेको कुरा तुरुन्त खोजेर पढ्न सकिने भए तापनि पुस्तकको महत्व भने बेग्लै रहेको छ । पठन संस्कृतिको विकाश राम्रो तवरले भयो भने बौद्धिक सङ्ख्यामा हलचल हुनसक्छ भन्ने एक पक्षको धारणा रहेको पाइन्छ ।
यसो पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको अवस्थामा हातमा किताब बोकेर उभिएको जमात न्यून थियो (छ) । क्याम्पस र विद्यालयका कुरा नगरौँ ।
खोलामा बाढी आएको कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ । त्यो सङ्लो पानी बिस्तारै धमिलो बन्दै जान्छ । त्यसरी नै देशमा हलचल आउन लाग्दा पनि थाहा हुन्छ । जब युवाहरूमा हलचलको सङ्केत देखा पर्छ तब त्यहाँ केही त पक्कै बदलिन्छ । पठन संस्कृतिमा पनि युवाको हलचलले सोझै धावा बोलिरहेको बेला युवाहरू नै गुमनाम भइदिए आखिर किन ? पाठकले किन लेखकको लेखनीमा नै प्रश्न गरे ?
नेपालभित्रको पुस्तक बजारः ओरालो लागेको हरिणको चाल
गत साल राजधानीका लगभग सबै प्रकाशन गृहबाट अनुमानित ५०० को हाराहारीमा पुस्तकहरू प्रकाशनमा आए । औँलामा गनिने केही पुस्तक छाडेर अन्य पुस्तक हेर्ने हो भने कहिले आए र कसरी हराए पत्तै भएन ।
पुस्तकको व्यापारमा लगानी गरेर बसेकाहरूलाई २०७५ बाट किताबले अर्को विकल्प खोज भन्ने साङ्केतिक इसारा गरिरहेको छ । पुस्तक व्यावसायीको अनुहारमा अहिले निरासाले गुँड बनाइरहेको छ । यो अवस्थालाई नै मध्यनजर गर्ने हो भने नेपाली पुस्तकको बजार ओरालो लागेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ ।
पुस्तक पसलको सम्बन्ध लेखकसँग हुँदैन । उनीहरूको सम्बन्ध भनेको पाठक र प्रकाशकसँग हुने हो । बजारको स्तर घटेको देखेपछि सबैले आ–आफ्ना तवरले यस कुरालाई व्याख्या गरेका छन् । “पाठकले के खोजेको छ ? प्रकाशन गृहले कस्ता पुस्तक निकालिरहेका छन् ? र, लेखकले के लेख्नुपर्ने हो ?” अहिलेका ठूला प्रश्न हुनसक्छन् । यो त्रिवेणीमा कुनै एक आशालाग्दो पुल नभएका कारण नै पुस्तक बजारको गति उकालोलाई छाडेर ओरालो हिँडेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
पुस्तक व्यापारी सन्तुष्टिमा कि संकटमा ?
पुतलीसडकमा उन्नती बुकका संचालक नवीन श्रेष्ठले किताब बेचेको १६ वर्ष भयो । उनलाई पुस्तकको बजार घटेको जस्तो लाग्दैन । किनकि बजारमा पाठक नै धेरै प्रकारका हुने भएकाले एक नभए अर्को छन् जस्तो उनलाई लाग्छ । तर पनि प्रगति बुक सपमा सबै किसीमका पुस्तकहरू पाइने भएकाले विशेष साहित्यको किताबमा भने व्यापार घटेको उनको अनुमान छ । उनले पुस्तक व्यापार गर्दाताकाको जनसङ्ख्या र अहिलेको जनसङ्ख्यालाई तुलना नगर्ने अवस्था छ । मान्छे बढे अनुसार नै किताबको सङ्ख्या बढ्दछ र पाठकको पनि । उनले समग्रमा भन्नुपर्दा किताब बिक्री हुनै छाडेको होइन, तर साहित्यको किताब भने केही हदमा खस्किएको नै छ ।
त्यसैगरि नारायणगढको सुनगाभा बुक हाउसका प्रोपाइटरले पनि बुझेको भनेको अहिलेको पुस्तकमा साहित्यका पुस्तकहरूको बजार घट्दो अवस्थामा रहेको कुरा नै हो । पाँच वर्ष अगाडिबाट हेर्दा पुस्तकको बजारले जुन रफ्तार लिइरहेको भन्ने भान थियो त्यो रफ्तार भने एक्कासी आएर घटेको लाग्छ उनलाई । सुनगाभा बुक हाउसमा धेरैजसो युवा पाठकहरू पुग्ने गरेको उनी बताउँछन् । ती वर्गले खोज्ने भनेको साहित्यका किताब हुन्, त्यसमाथि पनि लभ स्टोरीचाहिँ विषेश पर्दछन् ।
बानेश्वरमा बिहानको समयले किताब बेच्छ, साँझको समयले कपडा । पत्र–पत्रिकाको माहोल बिहानको समयमा हुन्छ । पत्र–पत्रिका किन्न आउनेले पुस्तक छान्छन्, हेर्छन् र फर्किन्छन् ।
मुक्तिनाथले सडकमै किताब बेचेको पनि १८ वर्षभन्दा बढी भयो । सुरुका दिनताका पढ्नेहरू कम थिए । बिस्तारै समयले पढ्नेहरूको नम्बर बढायो । सत्तरीको छेउछाउमा त उनलाई गोदाम जान पनि नभ्याउने अवस्था थियो । पढ्नेहरूको सङ्ख्या त्यो गतिले बढ्छ भन्ने उनले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् । तर, अहिलेको पुस्तक बजारबाट उनी एकदम निरास छन् । पुस्तकहरू सडकमा सीमित ठाउँमा असरल्ल राखिएका हुन्छन् । ग्राहक आउँछन, छान्छन् र त्यत्तिकै फर्कन्छन् ।
किताब त्यत्तिकै हेर्दै हिँडेको देख्दा रिस उठ्दैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनी भन्छन्, “लाग्दैन । काम नै यही हो । मलाई कामसँग रिसाउन आउँदैन ।”
मुक्तिनाथको सकडपसलबाट अङ्ग्रेजी किताब धेरै बिक्री हुन्छ । नेपाली पढ्नेहरू उनले एकदम कम देखेका छन् । छुट माग्नेसँग मोलमोलाइ गर्दैनन् । “किताबको डेट एक्स्पायर हुँदैन । घाटामा रहेर बेच्न सकिन्न”, उनी मुस्कुराउँदै भन्छन । एकले लगेन भने अर्को ग्राहकले लैजान्छ भन्ने पक्षमा छन् उनी । उनको एउटै आपत्ति सरकारले लगाएको करसँग रहेको छ । जसले गर्दा पुस्तकको भाउ आकासियो, ग्राहक पातलिए । उनलाई एउटै कुरा भन्न मन छ , पढ्ने वातावरण सरकारले मिलाओस्, कर हटाओस् ।
त्यसो त यो सत्तरीको दशकमा लभ स्टोरी पुस्तक धेरै निस्किए र ती पुस्तक सुरुमा जसरी निस्किए, त्यसको गुणस्तरमा गिरावट आएका कारणलले पनि युवा पाठक नै पो पुस्तकसँग टाडिएका हुन् कि भन्ने प्रश्न आउनु पनि स्वाभाविक नै हो । किनकि अहिले झट्ट हेर्दा नेपाली बजारमा युवा पाठक धेरै नै देखिन्छन् । युवाले खोजेको प्रेम मात्र हो त ? कि अन्य क्षेत्रमा पनि युवाको चासो रहेको छ ? यी कुरालाई लेखक र प्रकाशकले नै बुझ्नु पर्ने आवश्यकता आजको बजारले देखाउँछ ।
“कस्ता कृति छाप्ने ? कस्ता कृति नछाप्ने ?” भन्ने पूर्ण हक प्रकाशकलाई रहेको हुन्छ । एकातिर च्याउसरि उम्रेका प्रकाशन गृह र कृतिको मुल्याङ्कन नै नगरी लगानीकर्ता भेटेपछि फाइदाको लोभमा जे पनि र जस्ता पनि पुस्तक छापेका कारण नेपाली पाठक नेपाली पुस्तक बजारसँग रिसाएको जस्तो देखिएको छ । कति पुस्तकहरू छापिनु नै पर्ने भए तापनि नेपालमा बौद्धिक जमात न्यून रहेको बुझेर त्यस्ता पुस्तकमाथि काम गर्न केही प्रकाशकहरू डराउँछन् । अझ सामान्य कथामा सेक्स स्टोरी बुनेका किताबले पनि बजारमा असर गरेको पो हो कि भन्ने कुरा देखिन जान्छ ।
लेखक बन्ने होडबाजीले निम्ताएका नयाँ लेखकप्रति नयाँ प्रकाशन गृह सचेत रहनु पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा जे पनि छाप्ने गृहहरूबाट पुष्टि भइसकेको छ । यही हिसाबले पुस्तक प्रकाशन भइरहने हो भने पुस्तकको सङ्ख्या आकाश र पुस्तकको गुणस्तर पातालमा रहने अवस्था रहिरहनेछ ।
के भन्छन् त प्रकाशक ?
घट्दो बजारलाई कसरी उठाउने भन्ने कुराको हम्मेहम्मे परेका बेला सरकारले पुस्तकमा कर लगायो । जुन कुराले प्रकाशकलाई अहिले मारमा पारेको कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ ।
विगतका वर्षहरुमा मदन पुरस्कारको सूची निस्किएपछि ती सूचीका पुस्तकहरूको व्यापार सम्झन योग्य रहेको अनुभव प्रकाशकको रहेको छ । तर , यो वर्षकोे सूची निस्किसकेको अवस्थामा पनि कुनै प्रकारको बढ्दो व्यापार नदेखिएको उनीहरू स्वीकार्छन् ।
फाइन प्रिन्टका प्रबन्धक अजीत बरालको अनुमान छ कि यो वर्ष गुणस्तरीय पुस्तकको अभावले नै पुस्तक बजार सेलाएको हो । फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू राम्रै मात्रामा बजार जाने गरेको इतिहास भए पनि यो वर्षको उसको पनि बजार अनुमानको रेखाभन्दा तल छ ।
अजीत भन्छन्, “अहिले नेपालमा पुस्तक मात्र होइन, अन्य व्यापारलाई हेर्ने हो भने पनि बजार घटेकै देखिन्छ । देशमा भएको व्यापार मन्दीको असर पुस्तकमा पनि परेको हो ।”
दश वर्षकै तुलनामा हेर्ने हो भने पाठक बढेका छन् । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा ती पाठकलाई पुस्तक पढ्न सामाजिक सञ्जालले पनि पो रोकेको छ कि भन्ने अनुमान अजीतको छ ।
यदि पुस्तकको बजार घट्यो भने देश विकासलाई नै बाधा पुर्याउन सक्छ । किनकि बौद्धिक त पढेपछि न हुने हो । पुस्तक र बौद्धिकताको सम्बन्ध भएन भने त्यसले विकासमा असर गर्छ ।
यता पुस्तकको प्रकाशन र व्यापारलाई दुई हातमा सँगै बोकेर हिँडेका कृष्ण अविरललाई पनि यो वर्ष पुस्तक बजारचाहिँ धूलो नै भयो भन्ने लाग्छ । तीन महिने लामो बजार अनुगमनपश्चात् हालसालै राजधानी फर्किएका अविरललाई बजारको अवस्थाले पिरोलेको पनि छ ।
उनको मुख्य आपत्ति प्रकाशन गृहसँगै छ । उनी भन्छन्, “प्रकाशकहरूले जे पायो त्यही छाप्न थाले । जुन कुराले पाठक चिन्तित बने र बजार सुक्यो ।” ‘अन्र्तदृष्टि’, ‘ओशो जो मैले देखेँ’, ’सिंह सेनापति’ जस्ता किताबको पनि बिक्री नभएको अवस्थामा उनलाई राम्रो किताब आएपछि बिक्छ भन्ने कुरामा पनि विश्वास छैन ।
अविरलका अनुसार पाठकलाई पुस्तक पसलमा किताब छान्न स्वतन्त्र छाड्नु पर्छ । उसले किताब पल्टाओस् , हेरोस् र किनोस् । अहिले नेपाली पुस्तक बजारमा ग्राहकले पुस्तक पैसा नतिरी छुनै नपाउने अवस्था रहेको छ । पुस्तक बजार अन्योलमा रहनुको कारणमध्ये पुस्तक व्यावसायी पुरानै ढर्रामा गएका छन् । किताबको लागि उचित पसल नै न्यून छ । बिके बिक्छ, नबिके प्रकाशकको बिक्दैन भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पनि जरुरी देखिएको छ ।
अविरललाई श्रष्टाप्रति पनि आपत्ति रहेको छ । भन्छन्, “हाम्रा श्रष्टा अरूका पुस्तक पढ्दैनन् । यदी एकले अर्काको किताब पढ्ने हो भने नेपाली पुस्तक बजार स्वत चलायमान हुनसक्छ ।”
नेपाल सरकारले लगाएको करमाथि पनि अविरललाई पुस्तक बजारमा भएको हलचलप्रति शंका छ । सरकारले लगाएको करले पुस्तक बजारमा सोझै असर गरेको देखिन्छ । युवाले विशेष अङ्ग्रेजी किताब पढ्ने गरेका छन् । तर सरकारले कर नियम बनाएपछि जेठ यता अङ्ग्रेजी किताब आयात हुन छाडेको छ र नेपाली बजारलाई करले सिधा रूपमै असर गरेको छ ।
शिखा बुक्सका पुष्प पौडेललाई पनि अहिले बजारसँग चित्त बुझेको छैन । व्यावसाय र प्रकाशनमा उत्तिकै दख्खल राख्ने पौडेललाई १६ वर्षको पुस्तक अनुभव छ । गुणस्तर हेरेर नै किताब छाप्ने उनी बताउँछन् । किताब बिक्री नै हुन छाडेका भन्ने पक्षमा चाहिँ पौडेल छैनन् । उनी भन्छन्, “पहिलेको तुलनामा उत्पादित सङ्ख्याभन्दा केही हदसम्म पुस्तक नबिकेको चाहिँ हो ।”
लेखकले देखेको बजारः
भान्सामा के पकाउने भन्ने कुरा भान्सेलाई थाहा हुन्छ । मीठो नमीठोको जवाफ भने खानेले भन्ने हुन् । यस अर्थमा लेखक भान्से हु्न् भने पाठक खाने व्यक्ति ।
समाज शिक्षित भइसकेको छ । जसले जे दियो त्यही खाने समय छैन । यो कुरालाई राम्रो सँग बुझेका चर्चीत उपन्यासकार बुद्धि सागर ट्वीट गर्छन, “किताब बिक्न छाड्यो भनेर अनेकन समाचार छापिन थालेछन् ।
पढ्नेहरूले पढ्न छाडेका होइनन् । पढ्नेहरूको उचाई बढ्यो । हामी लेखकको लेखनीको उचाई घट्यो ।”
यता कवि नवराज पराजुलीका अनुसार सबै मोबाइलमा व्यस्त भए । उनी आफैँ पनि पहिलेको तुलनामा एकदम कम पुस्तक पढ्ने गरेको बताउँछन् ।
वास्तवमा हेर्ने हो भने यो डिजिटल समय हो । एक क्लिककै भरमा संसार आफू अगाडि आउँछ । त्यसमाथि संसार बुझेका पाठक अहिले डिजिटलको सहायताले झन् धेरै बाठा भएका छन् । यो सत्य हो । अब पाठकलाई झुक्याउँछु भन्नु बेकार छ ।
पाठकको पुस्तक बजारः
पछिल्लो समयबाट हेर्ने हो भने नेपाली पठन संस्कृतिमा पाठकको सङ्खया ह्वात्रै बढेको पाइन्छ । जुन बढ्नुमा युवा साहित्यकारकै हात रहेको छ भन्ने पनि जमात पनि ठूलो छ । तर आजको समयलाई नियाल्ने हो भने तिनै बढेका पाठक पुनः पलायन पो हुँदैछन् कि भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।
बुक एडिक्ट नवीन तिवारी अत्याधिक पुस्तक पढ्छन् । एक दशकभन्दा लामो पठन यात्रामा उनले अनगिन्ती किताब पढे । कति याद छन् र कति बिर्सिए । घरतिर हुँदा फाट्टफुटट् किताब पढ्ने बानीले राजधानी छिरेपछि उनलाई समयले बौद्धिक जमातसँग भेट गरायो । त्यही जमातसँग संगत गर्दागर्दै नवीनको अध्ययनको क्रम बढेर गयो ।
नवीनलाई पुस्तकको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ । सीमाभित्र र सीमा बाहिरका पुस्तकसँग उनको चिना परिचय राम्रोसँग रेहको छ । पुस्तकमाथि लगाइएको करको बारेमा नवीनको भनाइ छ कि यो सरकारको हेपाह प्रवृति हो । इतिहास नै हेर्ने हो भने सरकार बौद्धिकसँग डराइरहेको देखिन्छ । भन्छन्, “मैले लगभग पाँच वर्षपछि मात्र एउटा नेपाली पुस्तक पढेको छु । मैले के खोजेको छु भन्ने कुरा नेपाली पुस्तकले दिन सकेन त्यसैले मेरो अध्ययनको बाटो अङ्ग्रेजी तर्फ बढेको हो ।”
यता पोखरा विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी साहित्य पढेका नारायण कडरियालाई पनि अहिलेको पुस्तक बजारमा भएको हल्ला राम्रैसँग थाहा छ । ज्यादातर मात्रामा अङ्गर््ेजी पुस्तक पढ्ने गरेको कडरिया भन्छन्, “विश्वलाई हेर्नको लागि नेपाली पुस्तकभन्दा अङ्ग्रेजी पुस्तकबाट धेरै नै सहज छ । त्यसमाथि पनि नेपाली पुस्तकले विश्वलाई चिनाउन सक्ने ल्याकत भने अझै राखिसकेको छैन ।”
कडरियालाई सरकारले लगाएको करसँग पनि आपत्ति छ । थिंकरहरूलाई बढ्न नदिए सत्ता सजिलो बन्न सक्छ भन्ने उनको सरकारसँगको करबारे बुझाई छ । उनले सरकारले पढ्नेहरूलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि निरुत्साहित नै गरेको ठान्छन् ।
पुस्तकको बारेमा भन्नुपर्दा उनी पनि हामीमा पठन संस्कृतिको कमी नै छ भन्छन् । हाम्रो जग नै गतिलो छैन वा भएन । नेपालको पठन संस्कृतिलाई विकाश गर्नका लागि पुस्तकालयको योजना उच्च गतिमा अघि सार्नुपर्ने उनको मत छ । नेपाल बिस्तारै दुई भागमा विकाश भइरहेको छ , एक निजी विद्यालय हो भने अर्को सरकारी । यिनीहरूले आ–आफ्नै तवरले विद्यार्थी उत्पादन गरिररहको छन् । हामीले शिक्षा पद्धतिमा पो केही गर्नुपर्छ कि भन्ने उनको बुझाई हो ।
फरक समालोचकिय दृष्टिकोणः
पुस्तकलाई हेर्ने कोण समालोचकको अलि फरक रहेको हुन्छ । एउटा समालोचकले किताब पढ्दा त्यस किताब भित्रका कुरा मात्र पढिरहको हुँदैन । उसले त्यस पुस्तकसँगै बजार, समय अनि समाजका सबै पाटाहरूको एकैसाथ अध्ययन गरिरहेको हुन्छ ।
पुस्तकको बजारका बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं समालोचक महेश पौड्याल भन्छन्, “खासमा हामीले भनेजस्तो मन्दी आएको होइन । केही किताबको बिक्री सदाबहार छ, र पाठकको आकर्षण अक्षुण्ण देखिन्छ । मन्दी आएको भन्ने हुइयाँ केही प्रकाशकले चलाएका हुन्, जो आफूले छापेको झारपात सबै बिक्नुपर्छ र पुरस्कृत हुनुपर्छ भन्ने सोच्दछन् । आफ्नो लय र गतिमा प्रकाशन गरिरहेका प्रकाशकहरू ऊर्जाशील छन्, गतिमान नै देखिएका छन् ।”
तर, उनका अनुसार विगतको तुलनामा पाठक पुस्तकतिर अलि कम आकर्षित भएकोचाहिँ सत्य हो । बढ्नुपर्ने क्रम घटेको सत्य हो । यसका केही ठोस कारणहरू छन्ः
१. नेपालमा अधिकांश प्रकाशकहरूका आँखा केही पुरस्कारमा छन् । तिनैलाई लक्षित गरेर पुस्तक चैत(बैशाखमा छाप्छन् । यो बेला बितरकहरू स्कुले पाठ्यपुस्तकमा लागेका हुन्छन्, र साहित्यमा ध्यान दिँदैनन् । हप्तौँसम्म ट्रान्स्पोर्टले साहित्यको ढुवानी नै गर्दैन । पसलमा पुगे पनि विक्रेताले साहित्यलाई झोलाबाटै निकाल्दैन । दुईचारपल्ट सोध्दा पनि पुस्तक नपाएपछि पाठक, पुनः त्यसै पुस्तकको खोजीमा जाँदैन । र यो पाठ्यपुस्तकको याम सकिएलगत्तै नेपालमा मनसुन आउँछ । तराईमा अधिशय गर्मी, र देशैभरि वर्षा र बाढीपहिरो आउँछ । यसले प्रतिकूलता बढाउँछ । अनि पुस्तकतिर भन्दा ज्यानतिर ध्यान जान्छ पाठकको । प्रकाशक र लेखकले पनि पाठ्यपुस्तकको र मौसमको यो चक्रलाई ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
२. देशैभरि विविध कारणले निराशा छाएको छ । र अधिकंश लेखक “समाजको ऐना” बन्ने नाममा निराशा लेखिरहेका छन् । पाठक केही निकाश खोजिरहेका छन् । केही प्रेरणा खोजिरहेका छन् । केही नवीन दृष्टि खोजिरहेका छन् । नेपालबाहिर प्रकाशित, उत्प्रेरक (मोटिभेसनल) पुस्तकको धुमधाम बिक्रीले यस कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । सायद पाठक निराशाबाट उन्मुक्ति चाहन्छन्, जो नेपाली लेखकहरूले दिन सकिरहेका छैनन् ।
३. ब्रान्डेड भनिएका लेखक, निचोरिएको कागती जस्ता भए । दुईचारओटा पुस्तकमा उनीहरू निख्रिए । आफूलाई विषयमा, वा शैलीमा नवीकृत गरेनन् । पाठकले थाह पाए ।
४. धेरै लेखक, अरूलाई लेखाएर बजारमा आए । अनुहार आफ्नो, बुद्धि अरूको । पाठकले थाह पाए । विश्वास घट्यो ।
५. प्रकाशन गृहहरूले मोटो रकम लिँदै झारपात छाप्दै गरेका छन् । यो एउटा खुला सत्य हो । पाठकको अदालतले यस खेललाई खारेज गरेको बुझिन्छ ।
६. नयाँ लेखकहरू पुरानाका कुराको पुनरावृत्ति लिएर आइरहेका छन् । पुरानाहरू आफूलाई नवीकृत गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रयोगवादी भनिएका लेखकहरू अनेक विषयको उठान गर्छन्, तर पाठक समुदायलाई कुनै निकाशतिर डोर्याउँदैनन् । मूल्यहरूको विघटन गर्छन्, र वैकल्पित मूल्यको सङ्केत गर्न सक्दैनन् ।
७. धेरै प्रकाशकहरू पुराना पुस्तकको पुनमुद्रण गरिरहेका छन् । साहित्यलाई अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्ने विद्यार्थीले त किन्ला, साहित्यलाई रुचीको विषय बनाउने नयाँ पाठकका लागि, जति नै समृद्ध भए पनि ती पुराना विषय रुचीकर नहुन पनि सक्छन् ।
८. आजको पाठकको पुस्ता सीधै अन्तर्रा्ष्ट्रिय साहित्य पढिरहेको छ । त्यसैले, उसले नेपाली साहित्यलाई त्यसैको दाँजोमा हेर्नु स्वाभाविक पनि हो । यो तुलनामा नेपाली साहित्य कमजोर देखिनुले पनि पाठक निराश भइरहेका छन् ।
९. पुस्तक अचेल धेरै महँगा भएर गए । पाठकको क्रेयशक्ति सामान्य छ । यो पनि मन्दीको अर्को कारण हुन सक्छ ।
१०. नेपालमा प्रतिबद्ध लेखक निकै कम छन् । रहरका बढी छन् । यी रहरका लेखकले पाठकको निराशा बढाएका हुन् ।
करलाई पाठकले रुचाएका छैनन् । पठन संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पढ्नलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त्यसो भइरहेको छैन । डिजिटल पद्धतिलाई नजिकबाट जतिहेरे पनि दस्ताबेज पुस्तकमा नै भेटिन्छ । सरकारले पुस्तकालयको अभियान चलाइरहेको छ तर त्यसलाई तीव्र गतिमा चलाउन आवश्यक देखिन्छ । पुस्तक बजारमा आधुनिकता निम्त्याउन सकियो भने, प्रकाशकले पुस्तकको गुणस्तरमा ध्यान दिए भने, लेखकले आफ्नो लेखनीमा गम्भीर बनिदिए भने नेपाली पुस्तकले र बजारले इतिहास रच्न कत्ति पनि समय लाग्दैन ।
स्केच: रोजन खड्का
Tags: पुस्तकपुस्तक बजार